Ukuqeqesha Ukuhlukumezwa Ngokocansi - I-Foundation Reward Foundation
Ikhaya Ukuqeqesha ngokuhlukunyezwa ngokocansi
"Abaholi bezebhizinisi kumele baqinisekise ukuthi bathatha isinyathelo ekuqedeni ukuhlukunyezwa ngokocansi" kusho iKhomishana yokuLingana neBantu.
... Ukubukwa okuvamile kwezithombe zobulili ezingcolile kwe-intanethi kuxhumene kakhulu nokuziphatha kobulili nokuziphatha kabi? Amaphesenti ayishumi amadoda asebekhulile e-UK avuma ukusebenzisa izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi emsebenzini. Ngokungafani nesifo sokuphuza utshwala noma izidakamizwa, ukuziphatha kocansi okuphoqeleka kunzima ukubona kodwa imiphumela yaso ayiyona ingozi kakhulu. Amadoda asebancane ikakhulukazi abasengozini yokusetshenziswa ngokucindezela futhi, ngokuya phambili, abesifazane abasha.
NgoDisemba 2017, iKhomishana yezokuLingana kanye neKhomishana yamaLungelo (Human Rights Commission) (EHRC) yabhalela izihlalo zeFTSE 100 nezinye izinkampani ezinkulu ezichaza ukuthi kuzothatha izinyathelo zomthetho lapho kunobunye ubufakazi bokuhluleka ukuvimbela, noma ukubhekana nokuhlukunyezwa ngokocansi *. Lokhu kwenzeke ekuphenduleni ama-scandals eHollywood naseWestminster okuhlukunyezwa ngokobulili, nomkhankaso we- #MeToo. Ubabuze ukuba banikele ubufakazi bokuthi:
yiziphi izivikelo ezinawo endaweni yokuvimbela ukuhlukunyezwa ngokocansi
yiziphi izinyathelo abazithathele ukuqinisekisa ukuthi bonke abasebenzi bayakwazi ukubika izimo zokuhlukunyezwa ngaphandle kokwesaba ukubuyiselwa
ukuthi bahlela kanjani ukuvimbela ukuhlukunyezwa esikhathini esizayo
Yonke inhlangano isengozini engozini yokuhlukunyezwa ngokocansi. Ake sikusize uphendule ngokuphumelelayo ngokuthuthukisa uhlelo lonke lomsebenzi ukuze unciphise le ngozi. Sisebenzisa amasevisi ukuvikela isithombe somphakathi senkampani yakho kanye nabasebenzi endaweni yokuziphatha ngokocansi.
Amasevisi afaka phakathi
I-workshop yosuku oluphelele yempilo yomsebenzi nabasebenzi be-HR emthelela wezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi empilweni yengqondo nengokwenyama. Kuye kwavunyelwa i-Royal College ye-GPs. I-workshop yokuqala E-Edinburgh 23 January 2018.
Inkambo yosuku lwezinsuku zabasebenzi be-HR emthonjeni wezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi ezempilo yengqondo nengokwenyama, ukuhlukunyezwa ngokobulili, ukuboleka kwecala lobugebengu kanye nomonakalo ohloniphekile. Ababambiqhaza bazofunda ngezifundo zocwaningo kanye nocwaningo mayelana nokuthi yikuphi ukuqeqeshwa okungenziwa ukufaka isandla emnyangweni womthetho wenkampani ukuvimbela ukuhlukumeza ngokocansi esikhathini esizayo
Ama-workshop we-Half-day noma egcwele ngamaqembu abaphathi be-30-40 emthelela wezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi empilweni, ekuziphatheni emsebenzini, ngokuzibophezela komuntu siqu kanye nendlela yokwakha ukuqina njengendlela yokuvimbela ukubhekana nokuhlukunyezwa ngokocansi
Inkulumo ye-1 yehora lesingeniso kunoma yiliphi ubukhulu beqembu elichaza umthelela wezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi empilweni, ekuziphatheni emsebenzini, ngokuzibophezela komuntu siqu kanye nendlela yokwakha ukuqina njengendlela yokuvimbela.
I-Foundation Foundation - Uthando, Ubulili kanye ne-intanethi, i-international aid charity ehambisa izingxoxo nama-workshops emthelela wezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi empilweni, ekufinyeleleni, ebuhlotsheni nasebugebengu. Sivunyelwe yiRoyal College of General Practitioners ukuhlinzeka ngoqeqesho oluqhubekayo lokuthuthukiswa kochwepheshe kule nkampani kubaqeqeshi bezempilo kanye nabanye abanomsebenzi wezempilo.
UMphathiswa wethu omkhulu, uMary Sharpe, Ummeli, wenza umsebenzi kanye nomthetho wobugebengu futhi unolwazi olubanzi ekuqeqeshweni kwabasebenzi emazingeni kazwelonke nakwamanye amazwe. Eminyakeni ye-9 wafundisa abasebenzi nabafundi eNyuvesi yaseCambridge ekuthuthukiseni ubuholi bomuntu siqu. Siphinde sisebenze nabalingani bezinhlobo ezibandakanya abaqeqeshi bakwa-HR kanye nabahlengikazi.
Lapho abantu beqaphela ukuthi kungenzeka ukuthi izifo eziyinkimbinkimbi zihlobene nokusetshenziswa kwezithombe zobulili ezingcolile, zizimisele kakhulu ukuthatha umthwalo wemfanelo wokwenza ushintsho. Ukugxila ekuqeqesheni ngezimbangela eziyisisekelo kuyindlela ephumelelayo yokuvimbela noma ukunciphisa ukuhlukunyezwa ngokocansi esikhathini esizayo.
Ukuze uthole olunye ulwazi sicela uthinte mary@rewardfoundation.org Imfono: + 44 (0) 7717 437 727
* Ukuhlukumeza ngokocansi kwenzeka lapho umuntu eqhuba ukuziphatha okungafuneki okungokwemvelo ngokobulili futhi onenhloso noma umphumela wokwephula isithunzi somuntu noma ukudala imvelo esabisayo, enonya, ehlazisayo, ehlazolayo noma ekhohlakeleyo.
'Ngokuziphatha kobulili' kungabandakanya ukuziphatha okushoyo, okungekho amazwi noma okubonakalayo okubandakanya ukuthuthukiswa kobulili okungavumelekile, ukuthinta okungalungile, izinhlobo zokuhlukunyezwa ngokocansi, amahlaya ocansi, ukubonisa izithombe zobulili ezingcolile noma imidwebo, noma ukuthumela ama-imeyili ngezinto eziphathelene nobulili.